टिप्स Archives - Chanakya Post
काठमाडौं । पछिल्लो समय मेरो सेयर नखुल्दा प्रयोगकर्ता आजित भएका छन् । उक्त सफ्टवेयर नखुल्दा विशेष गरी आइपीओ भर्न र सेयर ट्रान्सफर गर्न (ईडीआइएस) गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताले अनेक हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसैबीच, व्यापक जनगुनासो आएपछि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ‘मेरो सेयर’को क्षमता विस्तारको लागि काम शुरु गरेको छ । सीडीएसले सर्भर थपेर […]
काठमाडौं । होली हिन्दू धर्मवलम्बीका लागि मात्र नभई हरेक धर्म, जात, जातीका लागि रमाइलो चाडको रुपमा मनाइँदै आएको छ । विगतमा नेपालीले मात्र नभई विदेशबाट आएका आगन्तुकहरुले समेत होली खेल्ने गरेका थिए । तर, यो पटक माहोल त्यस्तो छैन । विश्वभर कोरोनाको प्रकोपका कारण नेपालमा समेत त्रास फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले सर्तक […]
काठमाडौं । आज दशैंको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन बिजया दशमी । मान्यजन सँग टिका जमरा लगाउने र दक्षिणा लिने–दिने दिन । तर, यो वर्ष सहज छैन । महामारी व्याप्त भएका कारण सहज ढंगले टिका लगाउन र दक्षिणा लिन दिने अवस्था छैन । सरकारले पनि आफु जहाँ छौं त्यहिँबाट दशै मनाउनका लागि आग्रह गरेको छ । […]
काठमाडौं । आज दशैंको नवौं दिन । विभिन्न क्रियाकलाप गरेर आज नवमी मनाइँदैछ । अष्टमी र नवमी अन्य क्रियाकलापका अलावा खानपानको लागि पनि चर्चित छन् । विशेषगरी खसीको मासु खाएर यी दिन मनाइन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने रातो मासु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले धेरै लाभदायक पनि मानिँदैन । त्यसमाथी झन् मासु खाएर कुनै कसरत नगरी […]
कोरोनाविरुद्ध कसरी लड्ने, यस्ता छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनका सुझाव
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोप यतिबेला विश्वका १९२ देशमा फैलिसकेको छ । विश्वका विकसित र शक्तिशाली मानिएका अमेरिका, युरोपियन देशहरू यसबाट ग्रसित बनेका छन् । कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा दिनदिनै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । आज (मार्च २३ बिहान) सम्म विश्वका करिब ३ लाख ४० हजार व्यक्ति संक्रमित […]
काठमाडौं । पैसाको माध्यमबाट कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस सर्ने खतरा देखिएपछि छिमेकी मुलुक चीनमा गत फागुनमा करिब ८४ हजार करोड पैसा नष्ट गरियो । पैसाको माध्यमबाट कोरोना फैलने सम्भावनालाई न्यून गर्न चीन सरकारले केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका ती पैसा नष्ट गरेको हो । यसअघि गरिएको अध्ययनले पैसाबाट पनि विभिन्न प्रकारका भाइरस […]
होली हिन्दू धर्मवलम्बीका लागि मात्र नभई हरेक धर्म, जातजातीका लागि रमाईलो चाडको रुपमा मनाइँदै आएको छ । विगतमा नेपालीले मात्र नभई विदेशबाट आएका आगन्तुकहरुले समेत होली खेल्ने गरेका थिए । तर, यो पटक माहोल त्यस्तो छैन । विश्वभर कोरोनाको प्रकोपका कारण नेपालमा समेत त्रास फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले सर्तक अपनाउनु पर्ने भएको […]
काठमाडौं। के तपाईं घरजग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने सस्तो मूल्यमा घरजग्गा पाउँदै छु भनेर मख्ख नपर्नुहोस । घरजग्गा किन्दा मूल्य मात्र महत्वपूर्ण हुन्न । तपाईले किन्न आँट्नु भएको जमिन, त्यहाँ भएका भौतिक निर्माण र जमिन भएको ठाउँ पनि महत्वपूर्ण हुने गर्छ । कुन ठाउँमा छ जग्गा ? जग्गा किन्दा […]